Lisana - noocyo hore oo heer sare ah ee xilli-ciyaareedka cusub - Majaladda Nidaamka Baradhada
Lisana - noocyo hore oo heer sare ah xilli ciyaareedka cusub
в Talobixin takhasus leh, Taranka iyo abuur abuurka
Kala duwanaanshaha baradhada miiska hore ee bislaaday Lisana (doorashada Bavaria-Saat, Jarmalka) ayaa sii kordheysa caan ka ah beeralayda baradhada ee Ruushka. Waa maxay sirta ku jirta guushiisa?
Aad u horeeyso. Xilliga koritaanka waa 60-65 maalmood. Qoditaanka ugu horreeya ka dib beeritaanka waxaa la samayn karaa 40-45 maalmood.
Waxsoosaar sare. Laga soo bilaabo 1 hektar waxaad ka soo ururin kartaa 50-70 tan. Wax-soo-saarka ganacsiga - 123-249 c/ha, 41-48 c/ha oo ka sarreeya heerka caadiga ah. Wax soo saarka maalinta 45aad ka dib caleemaha buuxa (qodista ugu horeysa) - 100-215 c / ha, 60-63 c / ha ka sarreeya heerka; maalinta 55aad (qodista labaad) - 150-246 c/ha, 99 c/ha ka sarreeya heerka caadiga ah. Wax-soo-saarka ugu badan marka loo eego dhulalka kala duwan ee gobolka waa 299 c/ha, 113 c/ha oo ka sarreeya heerka caadiga ah.
U adkaysiga abaarta. Waxaa lagu kori karaa waraabin la'aan. Waxay si fiican ula qabsanaysaa xaaladaha cimilada ee gobollada koonfureed ee Ruushka. Waxay si fiican u qabatay 2021 si aan caadi ahayn oo qalalan.
Suuqgeynta sare. Wax-soo-saarka badeecada - laga bilaabo 92%. Digriiga waa halbeeg, dheerad-oval, oo miisaankeedu yahay 106 ilaa 139 g. Diirka waa siman yahay, dhacdada indhuhu waa mid aan caadi ahayn. Tirada digriiga ee hal baadiyaha ah waa 10-16 pcs. Maqaarka iyo hilibku waa jaale.
cudur u adkaysta (Wakiilka sababa kansarka baradhada, fayraska Y, laalaabtay iyo mosaic xariijimo leh, nabar goor dambe ah) iyo cayayaanka ( nematode cyst baradho dahab ah).
Waxay leedahay sifooyin dhadhan fiican leh. Si ka duwan inta badan noocyada hore, waxay leedahay dhibcaha dhadhanka ugu sarreeya. Kala duwanaanshuhu waa wax yar oo jajaban, cunto karinta nooca B. Maqaarka digriiga ayaa si gaar ah ugu fiican saladhyada, suxuunta dhinaca iyo maraqa. Saxarka marka la kariyo ma madoobaado. Waxa ku jira istaarijku waa 15,6%.
Kala duwan codsiga. Waxaa loo isticmaali karaa miiska iyo wax soo saarka warshadaha.
U adkaysta burburka farsamada. Ku habboon dhaqidda iyo baakaynta.
Ku habboon kaydinta muddada-dheer Muddada nasashada waxay socotaa ilaa bilowga Maajo.
Talo soo koraysa
Kala duwanaanshuhu wuxuu ku jiraa Diiwaanka Gobolka ee Volga Dhexe (7). Ku habboon beerista carrada ciid fudud.
Labbiska iyo biqilka ka hor ayaa lagula talinayaa ka hor intaan la beerin.
Heerka codsiga nitrogen waa 150 kg / hektar.
Fogaanta soo degista: 30-33 cm (oo leh 75 sentimitir u dhexeeya tiirarka). Waxaa lagu talinayaa in la yareeyo heerka isticmaalka metribuzin ka dib caleemaha baradhada.
Sababo la xiriira caabbinta aadka u wanaagsan ee noocyada kala duwan ee jirrooyinka dambe, inta u dhaxaysa buufintu waxay ka dheeraan kartaa heerka caadiga ah. Laakiin waxaa lagama maarmaan ah in la xakameeyo xaaladda alternariosis.
Shirkad LLC "MOLYANOV AGRO GROUP" waa wakiilka rasmiga ah ee shirkadda Jarmalka ee Bavaria-Saat ee Ruushka, waxay bixisaa noocyo kala duwan oo baradho shati ah oo loogu talagalay isticmaalka kala duwan, xilliyada bislaanshaha kala duwan, tiknoolajiyada beeraha iyo tayada macaamiisha. Dhammaan alaabooyinka waa kuwo shahaado ah oo buuxiya heerarka Ruushka iyo kuwa ajnabiga ah.
Tags: LisanaLLC "MOLYANOV AGRO GROUP"
ShareShare49Share35Si aad u soo diri
Baradhadu waa dalagga magnesium-ku-dalbasho ah. Wax-soo-saarka 50-60 t/ha, 60-70 kg/ha ee magnesium oxide ayaa laga saaraa ciidda. Ciid weyn...
Trade House Zelenit LLC waa shirkad la-talin ah oo kor u qaada tignoolajiyada casriga ah ee beeraha, walxaha muhiimka ah kuwaas oo ah wax soo saar cusub oo wax ku ool ah oo khadka Vitanoll ah iyo ...
Sharciga abuurka wuxuu ubaahanyahay in lasoo gabagabeeyo